I-Q & A-Iqela le-UP
Ngaba unokubonelela ngenkonzo ye-OEM?
Njani ngolwazi oluneenkcukacha ngemveliso yakho?
Sinokubonelela ngeeparameter eziphambili zobuchwephesha, ukusebenza, ubume beemveliso njl njl ngokweemfuno zabathengi.
Ngaba unokubonelela ngoqeqesho lwangaphambi kokuthengisa?
Iyafumaneka okoko nje abathengi befuna
Nayiphi na inkonzo yasemva kwentengiso?
Ukuba imveliso yonakele ngenxa yokunikezelwa ngokungachanekanga komthengi, umthengi kufuneka athwale zonke iindleko kubandakanya iindleko kunye neerhafu zothutho njl.njl. .
Njani ngokufakwa kunye noqeqesho?
Sinokubonelela abathengi ngokufakwa simahla kunye noqeqesho, kodwa umthengi linoxanduva lokuya nokubuya, amatikiti endawo, indawo yokuhlala kunye nesibonelelo sobunjineli.
Njani malunga nexesha lesiqinisekiso somgangatho?
Ixesha lokuqinisekisa ngemveliso ziinyanga ezili-12 emva kokushiya izibuko laseTshayina.
Njani malunga nentlawulo?
Ngokwesiqhelo i-T / T kunye ne-L / C engenakuphinda ibonwe ukuba isetyenziswe kwishishini kwaye nangona kunjalo, ezinye iindawo kufuneka ziqinisekise i-L / C ngumntu wesithathu ngokwemfuneko yebhanki yaseTshayina.
Siza kukunika elona xabiso libalaseleyo ngokokuba ungumthengisi okanye ungumsebenzisi wokugqibela.
Njani malunga nexesha lakho lokuhambisa?
Ngokubanzi, ixesha lokuhanjiswa kwezixhobo eziqhelekileyo liya kuba ziintsuku ezingama-30-60 emva kokufunyanwa kwediphozithi. Nangona kunjalo, ixesha lokuhanjiswa kwezixhobo ezizodwa okanye ezinkulu ziya kuba kwiintsuku ezingama-60-90 emva kokufunyanwa kwentlawulo.
Ngaba unokunika iisampulu zasimahla?
Asiboneleli ngeesampulu kumatshini opheleleyo. Ukuze sixhase abasasazi nabathengi bethu, siya kunika ixabiso elikhethekileyo koomatshini bokuqala abambalwa kunye neesampulu zezinto ezisetyenziswayo zokuprinta, kodwa ke zona ezo zithwala iimpahla kufuneka zithwalwe ngabasasazi kunye nabathengi.